Warkii.com-News and information about Somalia UPDATE: Mid kamid ah Waxgaradka Galmudug oo si adag u dhaliilay Heshiiskii Puntland & Galmudug ee Gaalkacyo - Warkii.com-News and information about Somalia
UPDATE: Mid kamid ah Waxgaradka Galmudug oo si adag u dhaliilay Heshiiskii Puntland & Galmudug ee Gaalkacyo
Nabadoon Cali Diiriye Alloore oo kamid ah Waxgaradka gobalka Mudug ee dhinaca Galmudug ayaa si kulul u dhaliilay heshiiskii u dambeeyey ee ay kala saxiixdeen Puntland & Galmudug, kaas oo dhabaha u xaaray in Kumanaan Qoys oo Abaaro daran ku haysteen deegaanada Galmudug ay usoo gudbaan waqooyiga gobalka Mudug.
Nabadoonka oo la hadlayay idaacadaha Muqdisho mid kamid ah ayaa dhaliilay in heshiiskaas aan gabi ahaanba wax laga fulin, isago u muuqday in uu iska indho tirayo in Kumanaan Qoys oo abaaro daran haysteen ay hadda ku nool yihiin deegaanada gobalka Barri.
Nabadoon Aloore ayaa sheegay in ay hadda socdaan Saan-saan colaadeed oo xaaladda uga sii dari karta, isagoo cadeeyey in tan iyo saxiixii heshiiskaas ay dhinteen 14 qof, lana kala dhacay xoolo gaaraya 200 Halaad.
Nabadoonka ayaa tilmaamay in xalka iyo nabad raadinta Gaalkacyo ay tahay mid u taala Odayaasha dhaqan, loona baahan yahay in ay si toos ah uga wada hadlaan, isagoo u muuqday in uu dhaliilayo habka siyaasiga ah ee loo wajahay qadiyadan.
Puntland & Galmudug ayaa bishii lasoo dhaafay horaanteeda Gaalkacyo ku gaaray is faham dhabaha u jeexay in wada hadalada nabdeed ay noqdaan kuwa si toos ah u hirgala, sidaas oo kalena waxaa heshiiskaas ku jiray in la joojiyo dhamaanba isku dhacyada hubeysan ee dhimashada iyo dhaawacaba keena.
Laakiin wixii ka dambeeyey heshiiskan, waxaa dhacay isku dhacyo sababay dhmasho, kuwaas oo badankooda ka yimid dhinaca Galmudug, ayna ugu dambeysay dhacdadii lagu dilay 2 nin oo dhalinyaro ah kana soo jeeday dhinaca Waqooyiga ee Gaalkacyo.